သီးသန့်လုံခြုံရေးပေါ်လစီ - ဂွမ်ဒေါင်း Dongguan Lesozoh
Lesozoh သင်သုံးစွဲဖို့အတှကျလှယျကူ navigate နှင့် Lesozoh ထုတ်ကုန်များရန်အဘို့အ Lesozoh Website များလွယ်ကူအောင်လိုသည်။ ကျနော်တို့အဆက်မပြတ်သူတို့ကိုပိုပြီးအသုံးပြုသူ-ဖော်ရွေစေ Lesozoh ကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေနဲ့ Lesozoh ထုတ်ကုန်များတိုးတက်ကောင်းမွန်ရေးနေကြသည်။
Lesozoh ကိုယ်ရေးကိုယ်တာသတင်းအချက်အလက်များနှင့် Non-ကိုယ်ရေးကိုယ်တာသတင်းအချက်အလက်များနှစ်ဦးစလုံးစုဆောင်းလိမ့်မည်။ "ကိုယ်ရေးကိုယ်တာသတင်းအချက်အလက်များ" သင်သိရှိနိုင်ဖို့သုံးနိုင်တယ်ဆိုသတင်းအချက်အလက်ကိုဆိုလိုသည်။ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာပြန်ကြားရေးတချို့ကဥပမာသင့်အမည်, လိပ်စာ, အီးမေးလ်လိပ်စာနှင့်ဖုန်းနံပါတ်ကိုများပါဝင်သည်။ "non-ကိုယ်ရေးကိုယ်တာသတင်းအချက်အလက်များ" ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်ပေါ်တွင်သင်သိရှိနိုင်ဖို့အသုံးမပြုနိုင်သောသတင်းအချက်အလက်ကိုဆိုလိုသည်။ non-ကိုယ်ရေးကိုယ်တာပြန်ကြားရေးတချို့ကဥပမာ Lesozoh Website များနှင့် Lesozoh ထုတ်ကုန်များနှင့်စပ်လျဉ်းအသုံးပြုမှုဒေတာ, ဘာသာစကားဦးစားပေးများနှင့် Lesozoh က်ဘ်ဆိုဒ်စာမျက်နှာအမြင်များပါဝင်သည်။
သတင်းအချက်အလက်စုစည်းနှင့် / သို့မဟုတ်အမည်ဝှက်နိုင်ပါသည်။ သတင်းအချက်အလက်စုစည်းအခါတခြားဖောက်သည်နှင့်သုံးစွဲသူများနှင့် ပတ်သက်. သတင်းအချက်အလက်နှင့်အတူပေါင်းစပ်ထားသည်။ သတင်းအချက်အလက်အမည်ဝှက်သောအခါ, ကိုယ်ပိုင်ပြန်ကြားရေးသာ non-ကိုယ်ရေးကိုယ်တာသတင်းအချက်အလက်များ်, စုဆောင်းဒေတာများနှင့်အချက်အလက်များ၏ကျန်ရှိနေသောသောအဘို့ကိုမှဖယ်ရှားပစ်သည်, ဥပမာ, အထူးသဖြင့် Router က၏မည်မျှအသုံးပြုသူများသည်ကိုဆုံးဖြတ်ရန်ထိုကဲ့သို့သောသကဲ့သို့, ပြည်တွင်းရေးသို့မဟုတ်ပြင်ပအသုံးပြုရန် repurposed ဖြစ်ပါတယ် အသုံးပြုသူများသည်တစ်ဦးအထူးသက်ဘ်ဆိုဒ်ကဗီဒီယိုသို့မဟုတ်ကြော်ငြာကြည့်ရှုအားပေးမည်မျှတစ်ဦးနေအိမ်ကွန်ယက်ကိုပတ်ဝန်းကျင်အတွက်အင်တာနက်-enabled ရုပ်မြင်သံကြားတို့ပါဝင်သည်, ဒါမှမဟုတ်။ ကအမည်ဝှက်ထားပြီးသည်အထိကိုယ်ရေးကိုယ်တာသတင်းအချက်အလက်များပါဝင်သောစုပေါင်းသတင်းအချက်အလက်များကိုယ်ရေးကိုယ်တာသတင်းအချက်အလက်များထည့်သွင်းစဉ်းစားနေသည်။ Anonymous သတင်းအချက်အလက်က Non-ကိုယ်ရေးကိုယ်တာသတင်းအချက်အလက်များထည့်သွင်းစဉ်းစားနေသည်။ ဒါဟာပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရသင်သည်ဖော်ထုတ်ထို့ကြောင့် non-ကိုယ်ရေးကိုယ်တာသတင်းအချက်အလက်များဖြစ်ပါတယ်ပါဘူးဒါကြောင့်ယေဘုယျအားဖြင့်သင်တို့ကို Lesozoh Website များသွားရောက်ကြည့်ရှုသို့မဟုတ် Lesozoh ထုတ်ကုန်ကိုအသုံးပြုတဲ့အခါစုဆောင်းအသုံးပြုမှုဒေတာစုစည်းနှင့်အမည်ဝှက်နှစ်ဦးစလုံးဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါ Lesozoh Website များနှင့် Lesozoh ကုန်ပစ္စည်းများမှညွှန်ကြားကြသည်မဟုတ်, မကျွန်တော်တို့ဟာ 13 နှစ်အောက်ကလေးတစ်ဦး၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာသတင်းအချက်အလက်များစုဆောင်းကြပါပြီ, ကျွန်တော်ဖျက်ပစ်လိမ့်မည်ဟုအကြောင်းကြားနေတယ်ဆိုရင် Lesozoh သိလျက် 13 နှစ်အောက်ကလေးများအနေဖြင့်ကိုယ်ပိုင်သတင်းအချက်အလက်စုဆောင်းထားဘူး ကျွန်တော်တို့ရဲ့စနစ်များအနေဖြင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးပြန်ကြားရေး။ သငျသညျအကြှနျုပျတို့ 13 နှစ်အောက်ကလေးတစ်ဦးအနေဖြင့်သို့မဟုတ်အကြောင်းကိုအမှတ်တမဲ့စုဆောင်းကိုယ်ရေးကိုယ်တာသတင်းအချက်အလက်များရှိစေခြင်းငှါယုံကြည်လျှင်, customerservice@Lesozoh.com မှာကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။
ငါတို့သည်သင်တို့နှင့် ပတ်သက်. အောက်ပါဒေတာစုဆောင်း process စခွေငျးငှါ:
သငျသညျအကြှနျုပျတို့ကိုပေးပြန်ကြားရေး ။ သငျသညျ Lesozoh ကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေပေါ်မှာပုံစံများဖြည့်ပါသို့မဟုတ်ဖုန်း, အီးမေးလ်ဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့နှင့်အတူကိုက်ညီတဲ့, chat သို့မဟုတ်မဟုတ်ရင်လျှင်, သင်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာသတင်းအချက်အလက်များပါဝင်နိုင်ပါသည်ရာ, သင်အကြောင်းသတင်းအချက်အလက်နှင့်အတူကျွန်တော်တို့ကိုပေးနိုင်ပါသည်။ ဒါဟာသင် Lesozoh က်ဘ်ဆိုက်များပေါ်တွင်သင်မှတ်ပုံတင်တဲ့အခါများကိုပေးစွမ်းတစ်ဦး Lesozoh ကုန်ပစ္စည်းမှတ်ပုံတင်ရန်သို့မဟုတ်ပြန်လာကျွန်တော်တို့ရဲ့န်ဆောင်မှုမဆိုစာရင်းသွင်းတစ်ထုတ်ကုန်များအတွက်ရှာဖွေမှု, Lesozoh ဝက်ဘ်ဆိုက်များတခုတခုအပေါ်မှာအမိန့်နေရာ Lesozoh ကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေပေါ်မှာလူမှုမီဒီယာလုပ်ငန်းဆောင်တာများတွင်ပါဝင်ရန်, တစ်ဦးယှဉ်ပြိုင်ရိုက်ထည့်ပါသတင်းအချက်အလက်များပါဝင်သည် , မြှင့်တင်ရေးသို့မဟုတ်စစ်တမ်းဖြစ်ရပ်တစ်ခု, download, firmware ကိုသို့မဟုတ်အခြားအကြောင်းအရာသို့မဟုတ်အခါသင် Lesozoh Website များသို့မဟုတ် Lesozoh ထုတ်ကုန်များနှင့်အတူပြဿနာတစ်ခုသတင်းပို့သို့မဟုတ်မဟုတ်ရင်ထောက်ခံမှုတောင်းဆိုရန်အတွက်ပါဝင်ဆောင်ရွက်။ သငျသညျအကြှနျုပျတို့ကိုပေးကိုယ်ရေးကိုယ်တာသတင်းအချက်အလက်များသည်သင်၏အမည်, လိပ်စာ, အီးမေးလိပ်စာ, ဖုန်းနံပါတ်နှင့်အခြားအဆက်အသွယ်သတင်းအချက်အလက်, ဘဏ္ဍာရေးနှင့်ခရက်ဒစ်ကဒ်သတင်းအချက်အလက်နှင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရသငျသညျကိုဖေါ်ထုတ်ရန်အသုံးပြုနိုင်သည့်အခြားသတင်းအချက်အလက်များပါဝင်နိုင်သည်။
ပြန်ကြားရေးငါတို့သည်သင်တို့နှင့် ပတ်သက်. စုဆောင်း ။ သငျသညျ Lesozoh Website များသို့မဟုတ် Lesozoh ထုတ်ကုန်ကိုအသုံးပြုတဲ့အခါကျနော်တို့ကိုအလိုအလျောက်အပါအဝင်သတင်းအချက်အလက်စုဆောင်းနိုင်တယ်:
အင်တာနက်ကိုသင့်ကွန်ပျူတာသို့မဟုတ်အခြားကိရိယာကိုချိတ်ဆက်ရန်အသုံးပြုသည်အင်တာနက်ပရိုတိုကော ( "အိုင်ပီ") လိပ်စာ, browser ကိုအမျိုးအစားနှင့်ဗားရှင်း, အချိန်ဇုန် setting ကို, browser ကို plug-in ကိုအမျိုးအစားများနှင့်ဗားရှင်း, operating system နဲ့ပလက်ဖောင်းနှင့်ဘာသာစကားဦးစားပေးအပါအဝင်နည်းပညာဆိုင်ရာအချက်အလက်များ။ ဤအချက်အလက်အားလုံးပုံမှန်အားဖြင့်သင့်ရဲ့ web browser ကိုပေးနေသည်, ကြှနျုပျတို့အထူးသကကိုတောင်းဆိုကြဘူး။
ရန်မှတစ်ဆင့်နှင့် (နေ့စွဲနှင့်အချိန်အပါအဝင်) Lesozoh ဝက်ဘ်ဆိုက်များအနေဖြင့်အပြည့်အဝ Uniform Resource Locator ( "URL ကို") clickstream အပါအဝင် Lesozoh Website များရန်သင့်အလည်အပတ်ခရီးအကြောင်းသတင်းအချက်အလက်, ; သင်ကြည့်ရှုအားပေးသို့မဟုတ်အဘို့ကိုရှာဖွေထုတ်ကုန် စာမျက်နှာတုံ့ပြန်မှုကြိမ်; ဒေါင်းလုပ်အမှားအယွင်းများ; အချို့စာမျက်နှာများမှလာရောက်လည်ပတ်သူအရှည်; ဗီဒီယိုများ watched; (ထိုကဲ့သို့သော scrolling မ, ကလစ်နှင့်မောက်စ်-over ကဲ့သို့) စာမျက်နှာအပြန်အလှန်သတင်းအချက်အလက်; နှင့်နည်းစနစ်စာမျက်နှာကနေဝေး browse လေ့ရှိတယ်။
မဆိုဖုန်းနံပါတ်သို့မဟုတ်အီးမေးလ်လိပ်စာဖောက်သည်ထောက်ခံမှု / ဝန်ဆောင်မှုကိုဆက်သွယ်လေ့ရှိတယ်။
ကျနော်တို့ကတခြားသတင်းရင်းမြစ်များထံမှလက်ခံရရှိပြန်ကြားရေး ။ ကျနော်တို့ကိုအ (အပါအဝင်, ဥပမာ, စီးပွားရေးမိတ်ဖက်များ, နည်းပညာဆိုင်ရာအတွက်ကန်ထရိုက်, ငွေပေးချေမှုနှင့်ပို့ဆောင်မှုန်ဆောင်မှုများ, ကြော်ငြာကွန်ယက်များ, ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုပေးသူ, ရှာသတင်းအချက်အလက်ပေးသူ, အကြွေးကိုကိုးကားအေဂျင်စီများ) မှန်ဆောင်မှုပေးသူကိုတတိယပါတီနှင့်အတူနီးကပ်စွာအလုပ်လုပ်နှင့်ငါတို့သည်သင်တို့အကြောင်းသတင်းအချက်အလက်ခံခြင်းငှါ သူတို့ထံမှ။
ကျနော်တို့ရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုအရေအတွက်ကျနော်တို့စုဆောင်းသတင်းအချက်အလက်များသုံးနိုင်ပါသည်။ ဤရွေ့ကားရည်ရွယ်ချက်များကိုသင်ကျွန်တော်တို့ကိုတစ်ခုသို့မဟုတ်တိုက်ရိုက်ဆက်စပ်ရည်ရွယ်ချက်များအတွက်သတင်းအချက်အလက်ပေးအကြောင်းပြချက်နှင့်ကိုက်ညီပါလိမ့်မည်။ အဲဒီလိုအချက်အလက်များ၏လုပ်အသုံးပြုမှုအောက်ပါတို့ပါဝင်သည်:
• Lesozoh Website များသို့မဟုတ် Lesozoh ကုန်ပစ္စည်းများအပေါ်သင်တို့အဘို့အကောင့်တစ်ခုဖွင့်လှစ်ရန်။
• Lesozoh ထုတ်ကုန်များ၏သင်၏ဝယ်ယူမှုလွယ်ကူချောမွေ့စေရန်။
•သင့်အကောင့်သို့မဟုတ်ဝယ်ယူမှုနှင့် / သို့မဟုတ်တစ် Lesozoh ကုန်ပစ္စည်း၏အသုံးပြုမှုကိုအသုံးပြုခြင်း authenticate ရန်။
•ကြှနျုပျတို့ထုတ်ကုန်ဒေတာဘေ့စ၌သင်တို့၏ Lesozoh ကုန်ပစ္စည်းမှတ်ပုံတင်ရန်ရန်။
•သင်နှင့်ကျွန်တော်တို့အကြားသို့ ဝင်. မဆိုကန်ထရိုက်မှပေါ်ပေါက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တာဝန်ဝတ္တရားထွက်သယ်ဆောင်ရန်နှင့်သင်ကျွန်ုပ်တို့ထံမှတောင်းဆိုရန်သောသတင်းအချက်အလက်, ထုတ်ကုန်နှင့်ဝန်ဆောင်မှုများအားဖြင့်သင်တို့ကိုပေး။
•အ Lesozoh ကုန်ပစ္စည်းများသငျသညျတောငျးဆိုခကျြပေးရန်။
•ဤကဲ့သို့သော feature အသစ်များ, ဘာဂ်သို့မဟုတ်အဆင့်မြှင့်အဖြစ်, သင်အသုံးပြုတဲ့ Lesozoh ထုတ်ကုန်များနှင့် ပတ်သက်. သတင်းအချက်အလက်နှင့်တကွသင်ပေးရန်။
•ကျွန်တော်တို့ကိုသစ်ကို Lesozoh ထုတ်ကုန်များဖွံ့ဖြိုးနှင့်လက်ရှိ Lesozoh ထုတ်ကုန်များတိုးတက်ကောင်းမွန်စေရန်ကူညီရန်။
•ကြှနျုပျတို့အသုံးအနှုန်းများ, အခြေအနေများနှင့်မူဝါဒများ Lesozoh Website များနှင့် Lesozoh ထုတ်ကုန်များနှင့်အပြောင်းအလဲများမှစသောအပြောင်းအလဲအကြောင်းကိုအကြောင်းကြားရန်။
• troubleshooting, ဒေတာနှင့်စာရင်းအင်းဆိုင်ရာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ, စမ်းသပ်ခြင်း, သုတေသနနှင့်စစ်တမ်းရည်ရွယ်ချက်များအပါအဝင်ပြည်တွင်းလုပ်ငန်းလည်ပတ်ရည်ရွယ်ချက်များအတွက် Lesozoh Website များနှင့် Lesozoh ကုန်ပစ္စည်းများစီမံခန့်ခွဲရန်။
• Lesozoh Website များနှင့် Lesozoh ထုတ်ကုန်များတိုးတက်ကောင်းမွန်လာရန်နှင့်အကြောင်းအရာသင်တို့အဘို့နှင့်သင့်ကွန်ပျူတာသို့မဟုတ်ကိရိယာအတွက်အထိရောက်ဆုံးထုံးစံ၌ပေးအပ်ကြောင်းသေချာစေရန်။
• Lesozoh Website များနှင့် Lesozoh ထုတ်ကုန်များ၏လုံခြုံရေးသေချာစေရန်။
•သင် Lesozoh ထုတ်ကုန်များနှင့်စပ်လျဉ်းတိုက်ရိုက်ချက်တင်အပါအဝင်တွင်ပါဝင်ဆောင်ရွက်ရန်ရွေးချယ်စေခြင်းငှါ Lesozoh Website များနှင့် Lesozoh ထုတ်ကုန်များ၏အပြန်အလှန် features တွေစောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့်ထိန်းညှိရန်။
•သင် Lesozoh Website များသွားလာကူညီဖို့ရန်။
•ကိုတိုင်းသို့မဟုတ်နားလည်ငါတို့သည်သင်တို့နှင့် Lesozoh Website များသွားရောက်ကြည့်ရှုသောသူသည်အခြားသူများအားအစေခံကြော်ငြာ၏ထိရောက်မှုနှင့်သင်နှင့်အခြားသူများအားသက်ဆိုင်ရာကိုယ်ပိုင်ကြော်ငြာကယ်နှုတ်ရန်။
•သင်နှင့် Lesozoh ကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေနဲ့ Lesozoh ထုတ်ကုန်များ၏အခြားအသုံးပြုသူများအားအလွန်အသုံးဝင်သောနေသော Lesozoh Website များနှင့် Lesozoh ထုတ်ကုန်များ၏ရှုထောင့်ကိုဆုံးဖြတ်ရန်ရန်။
ဒေတာအပြောင်းအလဲနဲ့သို့မဟုတ်သိုလှောင်မှုရည်ရွယ်ချက်များအတွက် Lesozoh အတွင်းမှာပဲ•။
•သင့်ရဲ့အချက်အလက်တွေကိုသိုလှောင်အပြောင်းအလဲနဲ့အမိန့်အပါအဝင်တစ်မေတ္တာရပ်ခံဝန်ဆောင်မှုသို့မဟုတ်ငွေပေးငွေယူပေးစီးပွားရေးလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များ, ဝန်ဆောင်မှုရောင်းချသူ, လုပ်ပိုင်ခွင့် Third-party အေးဂျင့်သို့မဟုတ်ကန်ထရိုက်တာများ, hosting ဝက်ဘ်ဆိုက်များသောကြောင့်ကိုယ်စားအီးမေးလ်ဆက်သွယ်ရေးပေးခြင်းနှင့်ဖောက်သည်ထောက်ခံမှုပေးအတူ။ ကျနော်တို့မေတ္တာရပ်ခံဝန်ဆောင်မှုသို့မဟုတ်ငွေပေးငွေယူဖြည့်စွက်သို့မဟုတ်များကိုလိုအပ်သောကိုယ်ပိုင်ပြန်ကြားရေးနိမ့်ဆုံးပမာဏကိုနှင့်အတူဤတတိယပါတီများများကိုသာ, ကြှနျုပျတို့တတိယပါတီများကိုသင်ထုတ်ဖော်ခဲ့ရာထက်ကွဲပြားခြားနားသောရည်ရွယ်ချက်အဘို့သင့်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာသတင်းအချက်အလက်များသုံးစွဲဖို့ခွင့်မပြုပါဘူး။
•အားလုံးသို့မဟုတ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုတစ်ဦးသောအဘို့ကိုတစ်ဦးကုမ္ပဏီနှစ်ခုမပေါင်း, ဝယ်ယူသို့မဟုတ်ရောင်းချရန်များ၏ညှိနှိုင်းမှုသို့မဟုတ်ပြီးစီးနှင့်အတူရှေ့ဆက်ဖို့ကျိုးကြောင်းဆီလျော်လိုအပ်သောအတိုင်းအတာအထိဝန်ဆောင်မှုပေး, အကြံပေးများသို့မဟုတ်အခြားတတိယပါတီများနှင့်အတူ။ Lesozoh နှင့်အတူရောနှောပေါင်းစပ်သွားလေသည်သို့မဟုတ်ရရှိသည်သို့မဟုတ်အခြားအဖွဲ့အစည်းကဝယ်ယူလျှင်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုဆက်ခံ entity မှတစ်ခုလုံးအဖြစ်လွှဲပြောင်းမည်ဖြစ်သည်။
•အစိုးရအစီရင်ခံတာဝန်ဝတ္တရားတွေနဲ့လိုက်လျောရန်နှင့်ကျွန်တော်တို့၏တရားဝင်အခွင့်အရေးများလေ့ကျင့်ခန်းသို့မဟုတ်တရားဝင်တောင်းဆိုမှုများဆန့်ကျင်ခုခံကာကွယ်ဖို့, (ထိုကဲ့သို့သောဆင့်ခေါ်စာသို့မဟုတ်တရားရုံးအမိန့်တုံ့ပြန်ကဲ့သို့) ပညတ္တိကျမ်းသို့မဟုတ်တရားဝင်လုပ်ငန်းစဉ်ကိုလိုက်လျောရန်။
•ထိုသို့သော Lesozoh အမှတ်တံဆိပ်ကာကွယ်သို့မဟုတ်အသုံးပြုမှု, ဥပဒေချိုးဖောက်မှုများ, ဉာဏပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှုချိုးဖောက်မှု, Lesozoh က်ဘ်ဆိုက်များ, လိမ်လည်မှုသို့မဟုတ်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးလုံခြုံမှုအလားအလာခြိမ်းခြောက်မှုများ၏အလွဲသုံးစားမှုများ၏ Lesozoh အသုံးအနှုန်းများချိုးဖောက်မှုများအားစုံစမ်းစစ်ဆေးအဖြစ်ကျွန်တော်တို့၏တရားဝင်အခွင့်အရေးများသို့မဟုတ်အခြားသူများ၏သူတို့ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရန်။
ထို့အပြင်ကျနော်တို့ကသူတို့ရဲ့ထုတ်ကုန်အလုပ်လုပ်နိုင်ပုံကိုတတိယပါတီများကိုပြသရန်, နေအိမ်ကွန်ယက်နှင့် utility ကိုအသုံးပြုမှုနှင့် ပတ်သက်. ခေတ်ရေစီးကြောင်းခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာဖို့အပါအဝင်ရည်ရွယ်ချက်အမျိုးမျိုးတို့အတွက်တတိယပါတီများနှင့်အတူ, Lesozoh ထုတ်ကုန်များနှင့် ပတ်သက်. အသုံးပြုမှုဒေတာအပါအဝင်စုစည်းနှင့်အမည်ဝှက်က Non-ကိုယ်ရေးကိုယ်တာသတင်းအချက်အလက်များ, မျှဝေနိုင်ပါသည် Lesozoh ထုတ်ကုန်များနှင့်ယေဘုယျအားဖြင့်အိမ်တွင်းကွန်ရက်တိုးတက်စေရန်။ ငါတို့သည်ဤအချက်အလက်သည်သင်ပြန်နှင့်ဆက်စပ်မရနိုငျကျနော်တို့က၎င်း၏အမည်ဝှက် form မှာအားလုံး shared သတင်းအချက်အလက်ကိုစောင့်ရှောက်ရန်တတိယပါတီများမှလိုအပ်ကြောင်းသေချာစေရန်ခြေလှမ်းကိုယူပါတယ်။
အချို့သော Lesozoh ထုတ်ကုန်များအတွက် Lesozoh တတိယပါတီကုန်ပစ္စည်းသို့မဟုတ်ဝန်ဆောင်မှုနှင့်သင်၏ Lesozoh ကုန်ပစ္စည်းကနေသတင်းအချက်အလက်ဖလှယ်ပါဝင်တံ့သောသင်တဦးတည်းသို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုတတိယပါတီထုတ်ကုန်နှင့်ဝန်ဆောင်မှုများနှင့်အတူ Lesozoh ထုတ်ကုန်များနှင့်ချိတ်ဆက် interface ရန်အဘို့အခွင့်အလမ်းပေးနိုငျသညျ။ သင်တစ်ဦး Lesozoh ကုန်ပစ္စည်းချိတ်ဆက်တဲ့တတိယပါတီကုန်ပစ္စည်းသို့မဟုတ်ဝန်ဆောင်မှုကိုဝယ်ယူအသုံးပြုနိုင်သည်သို့မဟုတ်ဒေါင်းလုတ်လုပ်ပါလျှင်အချို့သောကိစ္စများတွင်, သင်တို့လည်းထိုကဲ့သို့သောတတိယပါတီရဲ့ privacy ကိုမူဝါဒဘာသာရပ်ဖြစ်နိုင်သည်။ Lesozoh တတိယပါတီလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များ၏ privacy ကိုအလေ့အကျင့်အတွက်တာဝန်ရှိသည်မဟုတ်ပါ။ သင်ဤထုံးစံ၌တတိယပါတီထုတ်ကုန်မှတဆင့်တစ်ဦး Lesozoh ကုန်ပစ္စည်းကိုဝင်ရောက်လျှင်သင်သဘောတူခြင်းနှင့်ထိုကဲ့သို့သောတတိယပါတီတွေရဲ့ privacy မူဝါဒကသဘောတူသည်။ ကျနော်တို့ဂရုတစိုက် Lesozoh ထုတ်ကုန်များချိတ်ဆက်မည်သည့်တတိယပါတီထုတ်ကုန်များသုံးစွဲခြင်း၏ privacy ကိုမူဝါဒများနှင့်စည်းကမ်းချက်များကိုဖတ်ရှုဖို့တိုက်တွန်းပါသည်။
ငါတို့သည်သင်တို့၏ကိုယ်ပိုင်သတင်းအချက်အလက်များဝေမျှဘယ်သူကိုနှင့်အတူမည်သည့်တတိယပါတီအချက်အလက်များ၏လျှို့ဝှက်ချက်များကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့လိုအပ်သည်နှင့်အခြားရည်ရွယ်ချက်ကြောင့်အသုံးပြုခြင်းမှပိတ်ပင်တားမြစ်သည်။ ကျနော်တို့ကဤတတိယပါတီများသင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအချက်အလက်များ၏ကျွန်တော်တို့ရဲ့စုဆောင်းမှုအုပ်ချုပ်သောတူညီ privacy ကိုစာမူတွေနဲ့လိုက်လျောသေချာအောင်အားလုံးကျိုးကြောင်းဆီလျော်ခြေလှမ်းများယူပါလိမ့်မယ်။
အဆိုပါ Lesozoh ဝက်ဘ်ဆိုက်စတိုးဆိုင် (s) ကိုပေါ်ဝယ်ယူမှုအောင်သောအခါ, Lesozoh သင့်ရဲ့ငွေပေးချေမှုကဒ်သတင်းအချက်အလက်အတည်ပြုရန်တစ်ဦးငွေပေးချေမှု Processor ကိုအသုံးပြုသည်။ သင့်အတွက်ငွေပေးချေမှုကဒ်အချက်အလက်များကိုငွေပေးချေမှု Processor ကိုရှောကျသှားနှင့် Lesozoh နေဖြင့်စုဆောင်းသို့မဟုတ်မသိမ်းထားပါ။ အဆိုပါပေးချေမှု Processor ကိုသင်၏ဝယ်ယူမှုနှင့်မျှမကအခြားရည်ရွယ်ချက်များအတွက်စစ်မှန်ကြောင်းသက်သေပြနိုင်ဖို့သာဤသတင်းအချက်အလက်ကိုအသုံးပြုရန်ခွင့်ပြုချက်ဖြစ်ပါတယ်။
သငျသညျစျေးကွက်ရှာဖွေရေးရည်ရွယ်ချက်များအတွက်သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာသတင်းအချက်အလက်များကို process ဖို့မကျွန်တော်တို့ကိုမေးရန်ပိုင်ခွင့်ရှိသည်။ ကျွန်တော်တို့ဟာစျေးကွက်ရှာဖွေရေးရည်ရွယ်ချက်များအတွက်သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာသတင်းအချက်အလက်များသုံးစွဲဖို့ရည်ရွယ်မယ်ဆိုရင်ကျနော်တို့ (သင့်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာသတင်းအချက်အလက်များစုဆောင်းမတိုင်မီ) သင်အကြောင်းကြားပါလိမ့်မယ်, ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဟာစျေးကွက်ရှာဖွေရေးရည်ရွယ်ချက်များအတွက်မည်သည့်တတိယပါတီမှသင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာသတင်းအချက်အလက်များထုတ်ဖော်ရန်ရည်ရွယ်လျှင်။
ကျနော်တို့ကအမြဲသင်သည်သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာသတင်းအချက်အလက်များနှင့်ပတ်သက်ပြီးရွေးချယ်မှုအားငါပေးမည်။ တချို့ကရွေးချယ်မှုသည်သင် Opt-In သတိပေးချက်များသို့မဟုတ်လက်ခံမှုသေတ္တာများစျေးကွက်များအတွက်၏ပုံစံအတွက်ရှေ့ကိုတက်ပေးအပ်သို့မဟုတ်တတိယပါတီများနှင့်သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာသတင်းအချက်အလက်များဝေမျှထားပါသည်။ ပညတ်တရားအားဖြင့်ခွင့်ပြုရှိရာအချို့သောကိစ္စများတွင်, ငါတို့သည်သင်တို့ကိုလည်းထွက်ငြင်းပယ်ဖို့ရှေးခယျြမှုပေးနိုငျသညျ။ "Opt-Out" သင်ပြီးသားမျိုး-in ကိုရွေးချယ်ကြပါပြီ, ဒါပေမယ့်သင်ကနောက်ပိုင်းမှာသင့်ရဲ့စိတ်ကိုပြောင်းလဲစေဆိုလိုသည်။ Opt ထွက်တစ်ခုမှာပုံစံတစ်စျေးကွက်ကအီးမေးလ်အတွက်စာရင်းသွင်းထားခြင်းမှဖြုတ် link ကိုနှိပ်ခြင်းအားဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့စျေးကွက်ကအီးမေးလ်စာရင်းပယ်သငျသညျယူပါလိမ့်မယ်။ Lesozoh ရဲ့ယေဘုယျမူဝါဒကအသုံးပြုသူများကိုမျိုး-In ရှိသည်, ထက် Opt-Out, စျေးကွက်သတင်းအချက်အလက်လက်ခံရရှိရန်နှင့်တတိယပါတီများနှင့်အတူအချက်အလက်များ၏ခွဲဝေမှုခွင့်ပြုရန်ဖြစ်ပါသည်။ သင်သည်သင်၏ဝန်ဆောင်မှုကိုပယ်ဖျက်မဟုတ်လျှင်သင်သည်အခါအားလျော်စွာခံခြင်းငှါအရာ, (s) ကို Lesozoh ဝက်ဘ်ဆိုက်စတိုးဆိုင်အပေါ်အမိန့်သို့မဟုတ်ရေကြောင်းအတည်ပြုချက်၏ဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုသို့မဟုတ်လက်ခံရရှိဤ Opt-In / Opt ထွက်ရွေးချယ်မှုမဖြစ်မနေက်ဘ်ဆိုက်၏လက်ခံရရှိရန်လျှောက်ထားကြဘူးသတိပြုပါသို့မဟုတ် ကျေးဇူးပြု. အမိန့်။
နယူး Lesozoh ထုတ်ကုန်များ
ငါတို့သည်သင်တို့အနေဖြင့်စုဆောင်းသောဒေတာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိနေရာများမှာသိမ်းဆည်းထားလိမ့်မည်။ ဒါဟာအမေရိကန်ဖြစ်ပါသည်မဟုတ်လျှင်ငါတို့သည်လည်း, သင့်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာသတင်းအချက်အလက်များသင်နေထိုင်ရာတိုင်းပြည်ပြင်ပမှာသိမ်းဆည်းထားခံရဖြစ်ပေါ်နိုင်သောသင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာသတင်းအချက်အလက်များသိမ်းဆည်းထားနဲ့ process မှ cloud-based application များနှင့်ဝန်ဆောင်မှုများကိုအသုံးပြုနိုင်
ကျနော်တို့ဒါကြောင့်သင့်ကိုယ်ပိုင်သတင်းအချက်အလက်မှမဆိုပြောင်းလဲမှုကျွန်တော်တို့ကိုအကြောင်းကြားပါကတိကျမှန်ကန်သင့်ရဲ့ကိုယ်ရေးကိုယ်တာသတင်းအချက်အလက်များစောင့်ရှောက်ခြင်းနှင့် up to date ဖြစ်နေသင့်ရဲ့အကူအညီကိုလိုအပ်ပါတယ်။ သင့်အနေဖြင့်အောက်ပါနည်းလမ်းသည့်အချိန်တွင်မဆိုသင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာသတင်းအချက်အလက်များနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဦးစားပေးဝင်ရောက်ကြည့်ရှုခြင်းနှင့်ကို update နိုင်သည်
•သင်ကျွန်ုပ်တို့ထံမှလက်ခံရရှိမည်သည့်အီးမေးလ်တွင် "စာရင်းဖျက်ရန်" link ကိုနှိပ်ခြင်းအားဖြင့်ဖြစ်သည်။
customerservice@Lesozoh.com အီးမေးလ်ပေးပို့ခြင်းအားဖြင့်•။ သင့်အမည်, အီးမေးလိပ်စာနှင့်သင်ပြောင်းလဲပစ်ရန်လိုတဲ့သတင်းအချက်အလက်ကိုသို့မဟုတ်သင်မရှိတော့ပါလက်ခံရရှိရန်ဆန္ဒရှိသောပစ္စည်းအကြောင်းကိုတိကျတဲ့သက်ဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်များပါဝင်သည်ရန်သေချာစေပါပါ။
•အများအပြား Lesozoh Website များနှင့် Lesozoh ထုတ်ကုန်များအတွက်သင် Lesozoh က်ဘ်ဆိုက်တက်သည်လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သည့်အခါပေးအပ် URL ကိုမှာတည်ရှိပါတယ်သင်၏အွန်လိုင်းအကောင့်ဝင်ရောက်ခြင်းဖြင့်။
ငါတို့သည်သင်တို့မရှိတော့ကျနော်တို့နေဆဲသင်ဝယ်ယူခြင်းနှင့်ဖောက်သည်ထောက်ခံမှုကိစ္စရပ်များရှိသည်ဟုထိုကဲ့သို့သော Lesozoh ထုတ်ကုန်များအတွက်ထုတ်ကုန်နှင့်ဝန်ဆောင်မှု updates များကိုကဲ့သို့သောအခြားကိစ္စရပ်များအကြောင်းကိုသင်နှင့်အတူဆက်သွယ်ပြောဆိုစေခြင်းငှါ, ငါတို့ထံမှစျေးကွက်သတင်းအချက်အလက်ခံယူဖို့ရွေးချယ်လျှင်, ထိုနောက်တဖန်သတိပြုပါ။
ကွတ်ကီးများ, web beacons နှင့်အခြားက်ဘ် Tools များ
ကျနော်တို့ cookies များကို, ပါဝင်သောက်ဘ်ဆိုက်လင့်ခ်များနှင့် Widgets တွေ (စုပေါင်း, "ကို web tools များ") ကဲ့သို့အလိုအလျှောက်ဒေတာစုဆောင်းခြင်း tools တွေကိုသုံးပါ။ ဤရွေ့ကားကို web tools တွေကိုသင့်ရဲ့ browser သို့မဟုတ်သင့်မိုဘိုင်း device ကိုထိုကဲ့သို့သောကွန်ပျူတာ IP address ကို, browser ကိုအမျိုးအစားနှင့် service provider ကအဖြစ်, Website များနှင့် Lesozoh ကုန်ပစ္စည်းများ Lesozoh မှပို့ပေးကြောင်းအချို့သောသတင်းအချက်အလက်စုဆောင်းပါ။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, Lesozoh web beacons ကိုခေါ်ကုဒ်၏သေးငယ်တဲ့အပိုငျးပိုငျးသုံးနိုင်ပါသည်။ web beacons website တစ်ခုဟာဂရပ်ဖစ်ပုံရိပ်တောင်းဆိုမှုကိုမှတစ်ဆင့်သတင်းအချက်အလက်လွှဲပြောင်းသို့မဟုတ်စုဆောင်းရန်ခွင့်ပြုသည်။ ဤသည် Lesozoh ထိုကဲ့သို့သောသငျသညျသှားရောကျကွညျ့ရှုနေသောစာမျက်နှာ, သင်ယခင်ကသွားရောက်ခဲ့သည့်ရည်ညွှန်းစာမျက်နှာ၏လိပ်စာ, သငျသညျကိုအသုံးပြုနေသောအရာကို browser ကိုသို့မဟုတ်မိုဘိုင်းကိရိယာနှင့်သင့် display ကို setting များကိုများ၏လိပ်စာအဖြစ်သတင်းအချက်အလက်များစုဆောင်းရန်ခွင့်ပြုပါတယ်။ Lesozoh နှင့်၎င်း၏ကြော်ငြာမိတ်ဖက် Lesozoh ကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေနဲ့ Lesozoh ကြော်ငြာတွေဆံ့သောအခြားကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေပေါ်မှာကြော်ငြာထိရောက်သောလျှင်, သို့မဟုတ် Lesozoh ကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေပေါ်မှာအချို့သောဗီဒီယိုများကြည့်ရှုအားပေးလျက်ရှိလျှင်ထွက်ရှာတွေ့မှ, ဥပမာ, web beacons ကိုအသုံးပြုပါ။
Lesozoh အောက်ပါရည်ရွယ်ချက်များကို web tools များသုံးနိုင်ပါသည်:
•အသုံးပြုသူရဲ့တိုင်းပြည်နှင့်ဘာသာစကားဖော်ထုတ် Lesozoh ဝက်ဘ်ဆိုက်များ၏အခြားအသုံးပြုသူများထံမှသင်တို့ခွဲခြားရန်။
• Lesozoh က်ဘ်ဆိုက်များနှင့်ဝန်ဆောင်မှုများအပေါ်အနာဂတ်အသုံးပြုမှုအဘို့သင့်ကိုမှတ်ပုံတင်အချက်အလက်များသိမ်းဆည်းရန်။
•တင်ဆပိုမြန်ပြီးပိုထိရောက်စေရန်အနာဂတ်လည်ပတ်မှုအပေါ် Lesozoh က်ဘ်ဆိုက်များနှင့်ဝန်ဆောင်မှုများအချို့ features တွေကြိုလွှတ်တင်ပေးသည်ဖြင့်သင့် browsing အတွက်အတွေ့အကြုံကပိုကောင်းအောင်ရန်။
•သင်အသုံးပြုဘယ်လိုနားလည်ပြီး Lesozoh က်ဘ်ဆိုက်များနှင့်ဝန်ဆောင်မှုများနှင့်အတူအပြန်အလှန်ရန်။
• Lesozoh ဝက်ဘ်ဆိုက်များသို့မဟုတ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကြော်ငြာမိတ်ဖက် '' က်ဘ်ဆိုက်များသို့သွားရောက်ခြင်းသည့်အခါသို့မဟုတ် Lesozoh ထုတ်ကုန်တွေကိုအသုံးပြုတဲ့အခါပိုပြီးပုဂ္ဂိုလ်ရေးအတွေ့အကြုံနှင့်အတူသငျသညျကိုစိတ်ကြိုက်နှင့်ပေးရန်။
• Lesozoh Website များနှင့်ဝန်ဆောင်မှုများကိုတိုးတက်စေရန်။
•ထိုကဲ့သို့သောမည်မျှဧည့်သည်များကြော်ငြာမိတ်ဖက်ကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေပေါ်မှာကြော်ငြာကနေ Lesozoh က်ဘ်ဆိုက်များမှလာကြပြီအဖြစ်, Website များနှင့် Lesozoh ကုန်ပစ္စည်းများ Lesozoh နှင့် website ကိုအသွားအလာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာရန်ဧည့်သည်ကိုရေတွက်ရန်။
သငျသညျကို web tools များ၏ Lesozoh ရဲ့အသုံးပြုမှုနှင့် ပတ်သက်. အောက်ပါတို့ကိုရွေးချယ်မှုရှိသည်:
သင်သည်သင်၏ browser ကိုသို့မဟုတ်မိုဘိုင်းကိရိယာပေါ်တွင်သင့်လျော်သော setting ကိုသက်ဝင်ခြင်းဖြင့် cookies များကိုလက်ခံရန်ငြင်းဆန်လိမ့်မည်။ သို့သော်ရည်ရွယ်သကဲ့သို့သင်တို့ cookies တွေကို disable လျှင် Lesozoh Website များနှင့် Lesozoh ထုတ်ကုန်အချို့ကို features တွေအလုပ်မစေခြင်းငှါ, မှတ်ပုံတင်သို့မဟုတ်စစ်မှန်ကြောင်းအထောက်အထားပြသခြင်းနှင့် Lesozoh ဝက်ဘ်ဆိုက်စတိုးဆိုင်အရောင်းအလိုအပ်ကြောင်းဒေသများသုံးစွဲနိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။
အတော်များများကကြော်ငြာကုမ္ပဏီများသည်ဒစ်ဂျစ်တယ် Advertising ကြော်ငြာမဟာမိတ်ဒါမှမဟုတ် Network ကို Advertising ကြော်ငြာ Initiative မှအဖွဲ့ဝင်များဖြစ်ကြပြီး၎င်းတို့၏ဝက်ဘ်ဆိုက်များအပေါ်ဘေးဖယ်ထုတ်ရွေးချယ်မှုသည်။
သငျသညျကို click သို့မဟုတ်ရှုမြင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကြော်ငြာမိတ်ဖက် '' က်ဘ်ဆိုက်များတဦးအပေါ်တစ်ဦး Lesozoh ကြော်ငြာနှင့် redirected နေကြသည်ဒါမှမဟုတ် Lesozoh က်ဘ်ဆိုက်ကိုသွားလျှင်ကြော်ငြာစကားလက်ဆုံပြောဆိုမှုများကိုခြေရာခံနိုင်အောင်ကြောင်းအမှု၌, ကြော်ငြာမိတ်ဖက် (သင့်ဘရောက်ဇာပေါ်တွင်တစ်ဦးကို web Beacon နေရာဖြစ်နိုင်သည် အရာ) ကြော်ငြာထိရောက်သောခဲ့လျှင်ကျွန်တော်တို့ကိုအသိပေးပါ။ ဤရွေ့ကား web beacons မသက်ဆိုင်သင် cookies များကိုလက်ခံရန်ငြင်းဆန်ခဲ့သည်သို့မဟုတ်သင်ယေဘုယျအားဖြင့် Lesozoh Website များပေါ်တွင်သို့မဟုတ်အင်တာနက်ပေါ်ရှိခြေရာခံခံရဖို့မလိုချင်ကြဘူးကြောင်းညွှန်ပြခဲ့ကြခြင်းရှိမရှိ၏သင့် browser ပေါ်မှာပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။ သို့သော်သူတို့ကသာခြေရာခံကြော်ငြာစကားကန့်သတ်ရည်ရွယ်ချက် Lesozoh နေဖြင့်အသုံးပြုကြသည်နှင့်မည်သည့်လမ်းအတွက်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရသငျသညျကိုခွဲခြားသတ်မှတ်ကြပါဘူး။
သငျသညျ Lesozoh Website များအသုံးပြုတဲ့အခါတတိယပါတီများမှအချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှသင်၏အွန်လိုင်းလှုပ်ရှားမှုများနှင့် ပတ်သက်. သတင်းအချက်အလက်များစုဆောင်းနှင့်ကွဲပြားခြားနားသောဝက်ဘ်ဆိုက်များကိုဖြတ်ပြီးပေမည်။ Lesozoh ကျော်မျှထိန်းချုပ်မှုရှိပြီးဤတတိယပါတီများသင်စေပြီ browser ကိုရွေးချယ်မှုကိုခြေရာခံကြဘူးပူဇော်ကန်တော့ပွဲများရှိမရှိအတည်ပြုလို့မရဘူးပေမယ့်ဤတတိယပါတီများအားဖြင့်ခြေရာခံခြင်းရှောင်ရှားရန်, သင်, cookies များကိုငြင်းပယ်ရန်အထက်ပါရွေးချယ်မှုကငျြ့သုံးနိုငျသညျ။
ကျနော်တို့ Lesozoh Website များနှင့် Lesozoh ကုန်ပစ္စည်းများအားဖြင့်စုဆောင်းသတင်းအချက်အလက်များကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့ဒီဇိုင်းရေးဆွဲကျိုးကြောင်းဆီလျော်, အုပ်ချုပ်ရေးနည်းပညာနှင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကာအကွယ်ကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့ကြိုးစားကြသည်။ ကံမကောင်းစွာပဲ, အင်တာနက်ကနေတဆင့်သတင်းအချက်အလက်များ၏ဂီယာ 100% လုံခြုံဘူး။ ငါတို့သည်သင်တို့၏ကိုယ်ပိုင်သတင်းအချက်အလက်များကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့အတတျနိုငျဆုံးကြလိမ့်မည်ဖြစ်သော်လည်းကျနော်တို့က၎င်း၏လုံခြုံရေးအာမခံချက်မပေးနိုငျ; မည်သည့်ဂီယာသင့်ကိုယ်ပိုင်အန္တရာယ်မှာဖြစ်ပါတယ်။
ဒါဟာသင်အခြားသူများဝင်ရောက်နိုင်မယ့်ကွန်ပျူတာသို့မဟုတ်ကိရိယာကိုသုံးလျှင်မူကား, အခြားလူ encrypt မလုပ်ထားသည့်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များရယူနိုင်မည်အကြောင်းကြောင်းသတိပြုပါရန်အရေးကြီးပါသည်။ သင်သည်သင်၏သတင်းအချက်အလက်များကိုအခြားသူများအားမရရှိနိုင်ပါလိမ့်ချင်ကြပါဘူး အကယ်. နေဖြင့်ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲအသုံးပြုသူများကို access ကိုရှိစေခြင်းငှါအရာမှအများသုံးကွန်ပျူတာများသို့မဟုတ် devices များသို့မဟုတ်မည်သည့်ကွန်ပျူတာသို့မဟုတ် device ကိုအသုံးပြုတဲ့အခါ အသုံးပြု. အခါ, သတိထားလေ့ကျင့်ခန်း။
အကြှနျုပျတို့သညျအငျတာနကျပျေါအခါသင်သည်သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာသတင်းအချက်အလက်များကာကွယ်ပြည်၌ရှိသမျှသောကြိုတင်ကာကွယ်မှုယူကြောင်းအကြံပြုပါသည်။ ဥပမာအားဖြင့်, စကားဝှက်ဖန်တီးသောအခါအက္ခရာများနှင့်နံပါတ်များကိုပေါင်းစပ်အသုံးပြုမကြာခဏသင့်ရဲ့စကားဝှက်ကိုပြောင်းလဲရန်, သင်လုံခြုံတဲ့ဘရောက်ဇာကိုသုံးပါသေချာပါစေ။ သငျသညျလညျးသငျ၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာသတင်းအချက်အလက်များကိုမသုံးသင့်ပါတယ်ဒါကြောင့် (အစ "ဖော်ရွေအမည်များ" အဖြစ်လူသိများ) သငျ့ကို Wi-Fi ကို-enabled devices များ, နေအိမ်ကွန်ရက်များနှင့်ဝန်ဆောင်မှုများပေးကြောင်းအမည်များ, သင့်အိမ်အပြင်ဘက်ကိုအခြားသူများဖြင့်ရှာဖွေ ထောက်လှမ်း. ဖြစ်မည်အကြောင်းသတိပြုမိဖြစ်သင့် သင့်ရဲ့ဖော်ရွေအမည်များ။
Lesozoh က်ဘ်ဆိုက်များနှင့်အွန်လိုင်းဝန်ဆောင်မှုများကိုဝက်ဘ်ဆိုက်များသို့မဟုတ်တတိယအုပ်စုတွေက operated အွန်လိုင်းဝန်ဆောင်မှုများမှလင့်များင်နိုင်ပါသည်။ Lesozoh ကုန်ပစ္စည်းများမှာလည်းထိုကဲ့သို့သော Lesozoh ကုန်ပစ္စည်းနှင့်အတူအလုပ်လုပ်တယ်တဲ့တတိယပါတီအက်ပ်အဖြစ်တတိယပါတီများမှမှထုတ်ကုန်များနှင့်ဝန်ဆောင်မှုများကိုအသုံးပြုနိုင်သည်သို့မဟုတ်ပူဇော်စေနိုင်သည်။ သငျသညျ Lesozoh ကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေနဲ့ Lesozoh ထုတ်ကုန်များစွန့်ခွာပြီးတာနဲ့သင့်ရဲ့လှုပ်ရှားမှုများသည်တတိယပါတီဝက်ဘ်ဆိုဒ်များနှင့်အွန်လိုင်းဝန်ဆောင်မှုများကိုအသုံးပြုခြင်းနှင့် privacy ကိုမူဝါဒများ၏စည်းကမ်းချက်များအားဖြင့်အုပ်ချုပ်နေကြသည်။ Lesozoh privacy ကိုအလေ့အကျင့်သို့မဟုတ်ဤဝက်ဘ်ဆိုက်များများ၏ content နှင့်အွန်လိုင်းဝန်ဆောင်မှုများအတွက်တာဝန်မယူ, ငါတို့သည်ဂရုတစိုက်သင်လည်ပတ်ဘယ် website မဆိုနှင့်အွန်လိုင်းဝန်ဆောင်မှုကိုအသုံးပြုခြင်းနှင့် privacy မူဝါဒများ၏စည်းကမ်းချက်များကိုဖတ်ရှုဖို့တိုက်တွန်းပါသည်။
Lesozoh ကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေနဲ့ Lesozoh ကုန်ပစ္စည်းများခလုတ် "လိုပဲ" Facebook ကဲ့သို့သောလူမှုမီဒီယာ features တွေ, င်နိုင်ပါသည်။ ဤအင်္ဂါရပ်လူမှုမီဒီယာ features တွေနှင့်အတူအပြန်အလှန်လွယ်ကူချောမွေ့ဒါမှမဟုတ်သင်ကိုယ်ပိုင်သတင်းအချက်အလက် post စေခြင်းငှါအဘယ်မှာရှိလူမှုမီဒီယာကွန်ရက်စာမျက်နှာကိုသင်ချိတ်ဆက် cookies များကိုခန့် ထား. , သင့်ရဲ့ device ရဲ့ IP လိပ်စာနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းအချက်အလက်စုဆောင်းလိမ့်မည်။ ဆိုရှယ်မီဒီယာ features တွေနှင့်အတူအားလုံး interaction ကအဆိုပါ feature ကိုထောက်ပံ့လူမှုမီဒီယာကုမ္ပဏီ၏ privacy ကိုမူဝါဒဖြင့်အုပ်ချုပ်နေကြသည်။
သင်၌ပါဝင်ရန်သို့မဟုတ်မည်သည့် Lesozoh က်ဘ်ဆိုက်ပေါ်မှာငါတို့တိုက်ရိုက်ချက်တင်လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကိုမှသတင်းအချက်အလက် post အကယ်. သင်အဲဒီမှာပေးသတင်းအချက်အလက်များအခြားသူများမရရှိနိုင်ပါစေခြင်းငှါ, ဖတ်နိုင်ပြီးစုဆောင်း, ပေးပို့ဒါမှမဟုတ်အတွက်စေ့စပ် Lesozoh ပုဂ္ဂိုလ်များကအသုံးပြုကြောင်းသတိပြုမိဖြစ်သင့် ထိုကဲ့သို့သောဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုဌာနဝန်ထမ်းများနှင့်စီမံခန့်ခွဲမှုအဖြစ်ချက်တင် function ကို။ ဤအချက်အလက်သင်တို့ကိုလည်းမလိုလားသောမက်ဆေ့ခ်ျများပေးပို့ဖို့အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
သင့်ရဲ့သီးသန့်လုံခြုံရေးခငြ့်အရေး / ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်ရဲ့ Shine အလင်းဥပဒေ
အဘို့တတိယပါတီနှင့်အတူစီးပွားရေးအစုရှယ်ယာကယ်လီဖိုးနီးယားနေထိုင်သူပုဂ္ဂိုလ်ရေးအချက်အလက်များ၏အမျိုးအစားများမှလေးစားမှုနဲ့ထူထောင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကြားဆက်ဆံရေး, အချို့သတင်းအချက်အလက်ရှိပါတယ်ဘယ်သူကိုနှင့်တကွ, ကယ်လီဖိုးနီးယားမြို့ပြ Code ကိုပုဒ်မ 1798,83 အညီ, ကယ်လီဖိုးနီးယားနေထိုင်သူများစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုအနေဖြင့်တောင်းဆိုရန်အခွင့်အရေးရှိသည် ထိုကဲ့သို့သောတတိယပါတီနှင့်စီးပွားရေးဟာချက်ချင်းရှေ့ပြက္ခဒိန်နှစ်အတွင်းထိုကဲ့သို့သောသတင်းအချက်အလက်မျှဝေထားပါတယ်ဘယ်သူကိုနှင့်အတူတတိယပါတီများ၏အထောက်အထားတွေကိုအားဖြင့်တိုက်ရိုက်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးရည်ရွယ်ချက်များ။
Setp စဉ်အတွင်း Lesozoh တဲ J215 ။ 19 ~ 21.201 ...
# 67 အဆောက်အအုံ, Qingxi မြို့၏ Luhu အရှေ့လမ်း,
Dongguan စီးတီး, တရုတ်
catalog ၏နောက်ဆုံးအပ်ဒိတ်များနှင့် FULL VERSION sign up ပြုလုပ်ပါ။
© Copyright 2000-2017 Dongguan Siyao လျှပ်စစ် Co. , Ltd: အားလုံးအခွင့်အရေး။ | ဆိုက်ကိုမြေပုံ | စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ & အခြေအနေ s ကို | ကိုယ်ရေးအချက်အလက်မူဝါဒ|